Semalt Expert: 5 fitaovana hametrahana tsinontsinona ny valim-panontaniana ao amin'ny WordPress
Ny fanehoan-kevitry ny spam dia zava-misy henjana, ary ny mpamaham-bolongana dia hajaina noho ny habetsahan'ny fanehoan-kevitra tsy misy dikany isan-andro. Na izany aza, WordPress no rafitra fitantanana tsara indrindra dia afaka manampy amin'ny fanesorana ny tsikera spam. Raha nandao ity olana ity tsy misy mpitsidika ianao, ny valin-kevitra momba ny spam dia afaka mahatratra ny antontan-taratasy ao amin'ny blôginao ary mety ho voarara tanteraka amin'ny valin'ny fikarohana ianao.
Eto i Jack Miller, tompon'andraikitra ambony iray avy amin'ny Semalt , dia niresaka momba ireo fitaovana hametrahana tsetsatsetsa spam amin'ny WordPress.
Afaka miditra mora amin'ny Akismet ianao ao amin'ny Wordpress Plugin Directory. Izany dia plugin iray mahomby sy mahasoa, izay atomboka avy hatrany. Mivelatra amin'ny Automattic, ity plugin ity dia matanjaka ary tonga miaraka amin'ny safidy ampolony. Manakana ny spam sy ny endri-tsoratra roa izany mba hanamarinana ny hatsaran'ny fanamarihan'ny tranonkala. Izy koa dia manana algorithm hafa fandinihan-tena ho an'ny spam ary mamela anao hametraka ny fanehoan-kevitra ao amin'ny servery Akismet, ary tsy manome ny tranonkalanao fijery hafahafa sy tsy misy dikany. Mahagaga fa tonga amin'ny karama mihoatra ny 40 kilao i Akismet isam-bolana ary tonga lafatra amin'ny bilaogy manokana sy tranonkala tsy maka tombony.
Ity plugin ity dia azo jerena ao amin'ny directory Plugin Plugin ary manana mihoatra ny roa tapitrisa hetsika mavitrika hatramin'izao. Ity plugin ity dia natolotry ny WordPress mpikarakara Matt Mullenweg ary tsy misy vidiny. Mikarakara ny adiresy IP izay manely ny malware amin'ny aterineto, mandinika ny fanehoan-kevitrao, ary mijery ny hatsaran'ireo fanehoan-kevitra ireo. Haneho anao ihany koa ny antontan'isa amin'ny antsipiriany isan-kerinandro sy ny asan'ny spam mba hahafahanao mahazo ny hevitr'ilay bilaogy.
CleanTalk no iray amin'ireo kelinay indrindra, ary tsara indrindra sy be mpampiasa indrindra ao amin'ny aterineto ary manome tolotra mifandraika amin'ny mpitoraka bilaogy sy webmasters. Manakana ny fanamarihana spam, fanoratana tsy ara-dalàna, ary fisoratana anarana izany, ary mampiasa ny algorithm smart mba hahitana ny spam rehetra ao amin'ny tranonkalanao. Mamonjy ireo fanehoan-kevitra amin'ny spam ao amin'ny tahiry Clean Talk izany ary manaisotra azy ireo rehefa tsy ampiasaina.
Io no iray amin'ireo plug-ins izay tsotra indrindra sy be mpampiasa indrindra hatramin'izao.
Io no iray amin'ireo plugins fampiasa ho fampihomehezana tsotra indrindra. WordPress Zero Spam dia miasa tsara ary manakana ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpampiasa tsy fanta-pady sy ireo IP diso. Azonao atao ny mamela azy any amin'ny fotoana rehetra, ary afaka mahazo ny tsara indrindra avy amin'ny endri-javatra ianao. Izany dia miasa mba hisorohana ny botsaka sy ny sponjy tsy hiditra ao amin'ny tranokalanao ary hiteny ny fizarana tsetsatsetsa. Ity plugin ity dia maimaim-poana ary tonga amin'ny endrika isan-karazany hiadiana amin'ny olona tsy mahomby.
Azonao atao ny mitandrina ny bilaoginao WordPress na tranonkala madio, voatazona ary voalamina miaraka amin'ireo plugins rehetra Source .